Munhu anozvininipisa haadadi uye haazvikudzi. Haazvioni seari nani kupfuura vamwe. Anoziva kuti ane chivi uye anewo zvaasingakwanisi kuita.
MOSESI AKARATIDZA SEI KUZVININIPISA?
Mosesi haana kutanga kudada paakapiwa simba. Kazhinji kana munhu akangopiwa chinzvimbo zvinokurumidza kujeka kuti anozvininipisa here kana kuti kwete. Mumwe munyori ainzi Robert G. Ingersoll akararama kuma1800 akati: “Kana uchida kuona unhu chaihwo hwemunhu, chingomupa simba.” Mosesi akaratidza muenzaniso wakanaka zvikuru wokuzvininipisa paakapiwa simba. Akazviita sei?
Mosesi akapiwa simba rakakura paakanzi naJehovha atungamirire vaIsraeri. Asi izvi hazvina kuita kuti azvikudze. Funga nezvekuzvininipisa kwaakaratidza pakugadzirisa nyaya yekodzero yokugovewa kwenhaka. (Numeri 27:1-11) Nyaya yacho yaiva yakaoma nokuti zvaizosarudzwa zvaizoshandawo kunyange muzvizvarwa zvaitevera.
Mosesi akaitei? Akafunga kuti sezvo aiva mutungamiriri wevaIsraeri aigona hake kugadzirisa nyaya yacho oga here? Akafunga here kuti kugara kwake nebasa, ruzivo rwake uye kuziva kwake mafungiro aJehovha zviri nani, zvaizomuita kuti agadzirise nyaya yacho zvakanaka?
Munhu anozvikudza ndiye aizova nemafungiro akadaro, kwete Mosesi. Nhoroondo yeBhaibheri inoti: “Mosesi akaenda nenyaya [yacho] pamberi paJehovha.” (Numeri 27:5) Pafunge! Kunyange zvazvo Mosesi akanga ava nemakore anenge 40 achitungamirira vaIsraeri, haana kuzvivimba asi akavimba naJehovha. Izvi zvinotiratidza kuti Mosesi aizvininipisa zvechokwadi.
Mosesi haana kufunga kuti iye chete ndiye aifanira kuva nesimba. Akafara chaizvo Jehovha paakabvumira kuti vamwe vaIsraeri vave vaprofita. (Numeri 11:24-29) Akateerera nokuzvininipisa zano raakapiwa natezvara vake rokuti apewo vamwe mabasa kuti vamubatsire. (Eksodho 18:13-24) Paakanga ava pedyo nokufa, kunyange zvazvo akanga achakasimba, Mosesi akakumbira kuti pave nemunhu aizotora nzvimbo yake. Jehovha paakasarudza Joshua, Mosesi akatsigira nemwoyo wose murume uyu aiva muduku kwaari, uye akakurudzira vaIsraeri kuti vabvume kutungamirirwa naJoshua kuenda kuNyika Yakapikirwa. (Numeri 27:15-18; Dheuteronomio 31:3-6; 34:7) Ichokwadi kuti Mosesi aiona basa rokutungamirira vaIsraeri pakunamata seropafadzo. Asi aikoshesa vamwe kupfuura chinzvimbo chake.
Hatitombofaniri kuzvikudza nemhaka yezvatinogona kuita kana kuti chinzvimbo chatinenge tapiwa. Yeuka kuti kana tichida kuita basa raJehovha nemazvo, kuzvininipisa ndiko kunonyanya kukosha kupfuura zvatinokwanisa kuita. (1 Samueri 15:17) Kana tichizvininipisa zvechokwadi, tichaedza kushandisa zano reBhaibheri rouchenjeri rinoti: “Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, urege kuvimba nokunzwisisa kwako.”—Zvirevo 3:5, 6.
Muenzaniso waMosesi unotidzidzisawo kuti hatifaniri kunyanya kukoshesa simba kana kuti chinzvimbo chatingava nacho.
Kuzvininipisa sezvakaita Mosesi kunotibatsira here? Hongu! Kana tichizvininipisa zvechokwadi tinova vanhu vanogarika navo uye vanofarirwa. Chinotonyanya kukosha ndechokuti tinofarirwa naJehovha Mwari uyo anoratidzawo unhu hwakanaka hwokuzvininipisa. (Pisarema 18:35) “Mwari anoshora vanozvikudza, asi anoratidza mutsa usina kukodzera kuwanwa kune vanozvininipisa.” (1 Petro 5:5) Zvechokwadi tine chikonzero chakasimba chokutevedzera kuzvininipisa kwaMosesi!